Ukuhlanza ezinganeni - yini okumele ngiyenze? Lo mbuzo ekukhathaza abazali uma Ingane yaqala esekhala nesicanucanu ayekubona retching. Ngokwemvelo, lokhu kusho ukuhlanza e umntwana omncane kubangela ubuhlungu obukhulu futhi abazali ekhathazeke kakhulu. Hhayi ngaso sonke isikhathi lokhu mkhuba - phetho ukugula okungathí sina, kodwa ngisho izimo angawodwa akufanele zishiywe. Ukuze sifinyelele nomphumela omkhulu ekuqedweni ukuhlanza, kuyinto efiselekayo ukwazi izizathu ivela khona. Abazali kufanele bahlukanise phakathi ukuhlanza futhi regurgitation. Ngenxa izici yokwakheka emphinjeni nasesiswini ezinsaneni regurgitation ivela kaningi futhi akuyona uphawu lesi sifo. Ukuhlanza ezinsaneni kungenzeka kubangelwa overfeeding elula, kodwa uma uqaphela ezinye izimpawu ezifana ukucobeka nomkhuhlane - shayela nodokotela wezingane ngokushesha! Ukuhlanza - uphawu lubucayi kakhudlwana futhi lesi simo singenzeka nge ukwanda izinga lokushisa lomzimba ezinganeni, itheleleke nge umkhuhlane, umkhuhlane, imfiva kanye nezinye izifo ezithathelanayo. Futhi ukuhlanza kungaba omunye owabona izimpawu zezifo emathunjini. Kodwa ngezinye izikhathi izizathu lokhu mkhuba akukhona ezethusayo ngakho, isibonelo, ukuhlanza, kubangelwa reflex zokuzivikela, okuyinto ngaleyo ndlela kusiza esiswini ukuqeda ukudla eliphansi.
Ukuhlanza akuvamile kwenzeka ngokuzumayo, ngokuvamile kwandulelwe inkathi isicanucanu isikhathi ezahlukene Ngezinye izikhathi singakwazi amathe anda. Ukuhlanza kwenzeka emazingeni okushisa aphakeme, ngokuvamile iyunithi. Ngemva esiswini akhishwe, sidlule. izifo emathunjini (ikakhulukazi uhudo) kungase kuhambisane ukuhlanza okuphindaphindiwe, elihlasela enye ngemva kwenye. Lokhu kuyingozi kakhulu ngomntwana, isimo esinjalo kungabangela ukuphelelwa amanzi emzimbeni. Abazali kufanele batshele uma ingane ungenamdlandla, isikhumba sakhe esomile touch, akukho ukuchama isikhathi esingaphezu 3 amahora. Uma okuphindaphindiwe ukuhlanza futhi izimpawu zokuqala amanzi emzimbeni ngokushesha okubiza udokotela!
nokuphathwa ngendlela ehlukile kwabantu ukuhlanza akuyona ngoba uphawu izifo eziningi. Lokho kuyadingeka kanjani lesi sifo ecashile, futhi ukuhlanza kuyokwenzeka ngemva kwalokhu. Kunoma ikuphi, kudingeka ukuqapha njalo yezokwelapha wengane kanye ukunakekelwa kahle nabazali. Uma ukuhlanza iyaphindwa, kubalulekile ukuba sithathe izinyathelo zokuvimbela ukuba amanzi emzimbeni. Ngokukhethekile ukuhlanza ezinsaneni kufanele inikwe ukuvimbela nenshisekelo lokuqukethwe esiswini phakathi umgudu, okungase kubangele nenshisekelo nenyumoniya.
ukuhlanza okungavamile e ingane cishe akukho izinkinga. Kodwa ezinye imithetho kulesi simo unina kufanele ukwazi.
Ukuhlanza ezinganeni - lokho okufanele ukwenze ibele?
Ngakho, uma emva ukuhlanza isisu awunalutho, ungazami ukondla ingane ngokushesha. Lokhu kungase kubangele ukuhlaselwa omusha, umntwana belahlekelwa eziningi uketshezi kwandisa ingozi yokungenwa ukuphelelwa amanzi emzimbeni. Kuze isidlo esilandelayo udinga ulinde okungenani amahora ambalwa.
Uma ingane yakho ine imfiva, akufanele sizame ukunciphisa ke ngosizo amaphilisi imfiva-ekunciphiseni futhi kumasayiraphu. Bayobe "aphonswe" aphume esiswini ngesikhathi kuhlaselwa esilandelayo. Kuyadingeka ukusebenzisa amakhandlela noma ukwethula lezi zimali intramuscularly.
Ngemva ukuzinza lokushisa anganikeza ingane uketshezi oluncane, isib, amanzi abilisiwe ezinoshukela ulamula (ukunambitheka omuncu kunciphisa amathuba isicanucanu nokuhlanza kuhlasela kulandela). Uma ngaphakathi imizuzu eyishumi nanhlanu emva kwalokho ukuhlanza singavuselelwe ke obusamanzi zingandiswa (ngokoqobo spoon). Futhi amahora ambalwa kuphela ungazama ukondla ingane.
Ukuhlanza ezinganeni - yini okumele uyenze uma baba nokuzethemba okwengeziwe imithi yendabuko?
Ukuze iwenze ube lula isimo somntwana, ungasebenzisa infusions kanye Iziphungo yamakhambi. Ngakho, ukusiza ikhambi ginger impande powder. Kuyadingeka ukuba ulungiselele amanzi ginger, ivuse wesithupha isipuni ginger powder in ingilazi yamanzi afudumele. Leli thuluzi Kunconywa abantwana kuze iminyaka emithathu, ke aqede isicanucanu nokuhlanza eyeka ngokushesha. Kufanele sibe ukushisa e 1/2 tsp. Ukuze izingane iminyaka efinyelela kwemithathu ingalungiswa futhi ngezindleko zemithi engamakhambi. Mark letilinganako lemon namafutha, chamomile, peppermint, uhlanganise ugaye. Isipuni amakhambi, uthele ingilazi yamanzi abilayo, shiya for isigamu sehora ngaphansi lid ivaliwe, abakhwabanisi. Phuza isigamu noma lonke isipuni. Folk abelaphi batusa decoction empandeni valerian. Ukupheka usebenzisa impande ezomile nepepper, teaspoonful okuyinto uthele 250 amagremu amanzi bese ubilise imizuzu 12-15 on ukushisa low, bese usebenzisa abandayo kanye lemifanekiso. Thatha izikhathi 3 ngosuku (1 tsp)
ngaphambi nje ukusebenzisa amakhambi abantu, nokho, uxhumane nodokotela wakho.
Yini okumele uyenze uma ingane vomits akukho ebonakala iyisizathu?
Ngezinye izikhathi kuyenzeka ukuthi ingane has a lokushisa, ukudla okusolisayo akasidlanga, kodwa abagulayo vomits. Lokhu kungase kube ngenxa ukutheleleka emathunjini bese Amagciwane angangena emzimbeni kusukela kuphephile ngoba uhlobo imikhiqizo. Ngakho-ke, ngokushesha ukuya umnyango ezithathelwanayo bese ubuyela uvivinyo ezidingekayo. Kuyadingeka ukukhumbula ukuthi ukuhlanza kungase kubonise wathola ukulimala ekhanda futhi ukuxukuzeka, ngakho uma nje kokuba ingane wawa washayeka, udinga ukuba afune usizo lwezokwelapha.